Sawirada | Somchess.net | Page 4
Shirweynaha Afaraad ee Xiriirka Shatarajiga Soomaaliya oo dib loogu doortay Guddoomiyihii hore + Sawirro
Posted On Wednesday, June 26, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shirweynihiisii afaraad, iyadoo halkaasina ay ka dhacday tartanka Guddoomiyaha Xiriirka iyo xubnaha kale ee ka tirsan Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya. Guddiga Doorashada ...
Guddiga Olyampikada Soomaaliya oo ciyaaro iyo fantasiyo ku maamuusay maalinta Olympic Day + Sawiro
Posted On Monday, June 24, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Seminaar Muqdisho uga furmey garsoorayaasha kubadda koleyga + Sawirro
Posted On Sunday, June 23, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga ayaa Seminaar socon doona muddo 30-maalmood ah uga furay Muqdisho garsoorayaasha dhexdhexaadiya ciyaarta kubadda Koleyga. Furitaankii tababarkaasi ayaa waxaa ka qeyb galay, Xoghayaha GOS Duraan Axmed ...
Xiriirka K/Gacanta oo Muqdisho ka furey Tartankii Xidigaha + Sawiro
Posted On Saturday, June 22, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Xiriirka kubadda Gacanta ayaa magaalada Muqdisho si rsmi ah uga furey tartankii xidigaha kubadda gacanta oo ay ka qeybgalayaan ilaa sadex kooxood oo ku ciyaaraya magacyada shirkaddo kala duwan,oo kala ...
Dr. Cali Cusmaan: “Aan diiradda saarno sidii tartamada Olympikada Qaaradda Afrika loogu qaban lahaa”
Posted On Monday, June 3, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Waxa dhawaan Xafiiska Gudoomiyaha Gobolka Georgia lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay ha'yada la yiraahdo AFRICA HERITAGE CENTERoo uu maamule ka yahay Safiirka lagu magacaabo Tunda Adetunji, waxaana shirkaasi looga ...
Xiriirka Ciyaaraha fudud oo Muqdisho ku qabtay tartamada IAAF day + Sawiro
Posted On Thursday, May 30, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Xiriirka ciyaaraha fudud ayaa tartamo orodo ku maamuusay maalinta IAAF Day ee 28-ka May, iyadoo u soo xaadireen madax katirsan Gudiga olombikada Soomaaliyed,Xiriirada,kala duwan iyo wasaaradda adeega bulshada dhinaca sportiga,Macalinka ...
SIMAD oo soo gabagabeysay bandhig Dhaqameed + Sawirro
Posted On Tuesday, May 28, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Jaamacadda SIMADayaa maanta soo gabagabeysay toddobaadka dhaqanka (Cultural Week) oo sabtidii ka bilowday xarunta jaamacadda ee magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu soo bandhigay tartamo dhaqan, Diini iyo kuwa ciyaareed oo ...
X.K.S oo London qado sharaf ugu sameeyay Gudd. Isboortiga Jabuuti
Posted On Monday, May 27, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Wakiilka xaga maamulka ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta u fadhiya dalka Ingiriiska ahna guddoomiyaha ururka White Star Association Dr Cabdi Colaad Raage ayaa hogaamiyay munaasabad qado sharaf ah oo ...
Gudoonka cusub ee xiriirka kubadda Koleyga afarta sano ee soo socota oo lagu doortey Muqdisho + sawiro
Posted On Sunday, May 26, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Congresskii 6-aad ee xiriirka kubadda koleyga ayaa lagu qabtay Muqdisho,iyadoo halkaasina goob jog ka ahaayeen Madax katirsan Gudiga Olombikada,wasaaradda Houmarinta adeega bulshada qeybta sportiga iyo bahda warfaafinta. Doorashada ayaa waxaa dhinaca ...
Posted On Monday, May 20, 2013 By admin. Under Sawirada, wararka
Shirweynihii 6-aad ee xiriirka kubadda gacanta ayaa maanta lagu qabtey Hotelka Shamow ee magaalada Muqdisho,iyadoo ay kasoo qeybgaleen dhamaan kooxaha hoos taga xiriirka,madax ka socota GOS,bahda saxaafadda iyo marti sharaf ...